कीरोव - क्षेत्रीय केन्द्र, भिटका नदीमा उभिएको छ। रूसको यस लोक हस्तशिल्पका लागि बाहिर परे ज्ञानेन्द्र: डिमकोवो खिलौने र किकर लेस। एक अचम्मको परम्परा हो जुन मूल छुट्टी "Svistoplyaska" मनाउन र हाम्रो देशका बासिन्दालाई स्वादिष्ट कवस संग प्रसन्न हुन्छ।
तर त्यहाँ शहरी जीवनमा एक नकारात्मक तत्व छ - "समस्या" नियोक्ता। न्युयोर्कहरूको एउटा कालो लिस्ट पनि (कीरोरो) सिर्जना गरिएको छ। ती मध्ये केही पहिले नै सबै-रूसी ब्ल्याकलिस्टमा उल्लेख गरिएको छ।
एक स्थापित अवधारणा
बेइमानी नियोक्ताको बारेमा सबैभन्दा पूर्ण जानकारी ब्ल्याकलिस्टको मुख्य उद्देश्य हो। यदि नियोक्ताले एक साक्षात्कारको लागि उम्मेदवारलाई आमन्त्रित गरेमा, "ब्ल्याकलिस्टमा" लिनुहोस् ", उनीहरूले उनीहरूको गतिविधि बारे प्रकाशित समीक्षालाई अन्धकारमा विश्वास गर्दैनन्। यो दु: खी छ, तर प्रायः यस्तो सूचीहरू प्रतियोगिहरु द्वारा प्रयोग गरिन्छ, मजदुरहरूको लागि अशुद्ध संघर्षको नेतृत्व। त्यसैले, केही समीक्षाहरू अध्ययन गर्न सिफारिस गरिन्छ, र विभिन्न स्रोतबाट नियोक्ताको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नले आवेदकले काम खोज्ने प्रक्रियामा निराशा र परेशानीबाट बच्न अनुमति दिन्छ।
वैसे, "काले नियोक्ता" संग साइटहरु मा मंचहरु यदि सबै होइन, साधारण मानिसहरूलाई धेरै समस्याहरु समाधान गर्न सक्षम छन्। तर तपाई आलोचकहरु द्वारा बनाई गए दावी को सार मा ध्यान दिनुपर्छ - सम्भवतः एक व्यक्ति मात्र अपमानित वा गुस्सा हुन्छ, यद्यपि हालको अवस्थामा उसले आफूलाई दोषी छ।
के केरोवोहरूले कस्ता कुरा गर्छन्?
धेरै भन्दा धेरै शहर मा बेपत्ता नियोक्ताहरु संग असंतुष्ट। उपयुक्त स्रोतहरूमा धोखाधडीहरूले नयाँ आवेदकहरूलाई चेतावनी दिएपछि, उनीहरूको प्रतिक्रिया छोड्छन्।
प्रायः वर्णन गरिएको अनंत कर्मचारीहरूको कारोबार हो, कुनै पनि उल्लङ्घनको उल्लङ्घनको लागि "ब्रह्म" दण्डहरू। त्यसोभए, भाषण अधिकारीहरु को अत्याचार, करों संग धोखाधड़ी, आदि को बारे मा छ। केरोव को उद्यमों को बारे मा केहि समीक्षाहरु संग अन्त: "द्वारा पास, या अन्य तपाईं हुनु पर्छ!" शहरका बासिन्दाहरूले कम वेतनको बारेमा गन्ती गर्छन्, बाजा श्रम अनुबंधको गैर-समावेशता, वरिष्ठहरूको बेपत्ता।
तर विशेषज्ञहरूको अनुसार, नियोक्ताहरूको कालोसूची (केरोवो) - यो अन्तिम उदाहरण होइन। यस क्षेत्रका लागि राज्य श्रम निरीक्षकको आधिकारिक वेबसाइटमा एक बुकमार्क छ जसले तपाईंलाई "खराब" नियोक्ताको बारेमा उजुरी लेख्न अनुमति दिन्छ। श्रम निरीक्षक को वेबसाइटहरु र रूसी संघ को श्रम र रोजगार को संघीय सेवा मा एक समान प्रकार को उपचार उपलब्ध छ।
LLC "प्लांट ह्याङ्गर्स" को सकारात्मक आधिकारिक साइटले लेखेको छ कि कम्पनीले धातु संरचनाको बजारमा स्थिर स्थानमा राखेको छ। उद्यममा विशेष कार्यशालाहरू, योग्य कर्मचारीहरू छन्, हरेक छ महिनामा अनिवार्य प्रमाणपत्र फर्काउने। आदि रचनात्मक तस्बिरहरू यो पुष्टि गर्छन्।
तर ... नियोक्ताहरूमा प्रतिक्रिया (केरोवो) विशेष वेबसाइटहरूमा र फोरम मात्र यो "इन्टरनेट" चिठी यस उद्यमका कर्मचारीहरूको असुविधाको बारेमा। मुख्य कुरा यो हो कि मजदूरी भुक्तान नगरी। स्टकर्स जसमा कार्यकर्ताहरू बास बस्न बाध्य छन्, सबै भन्दा न्यूनतम सुरक्षा आवश्यकताहरू पनि पूरा गर्दैनन्। तिनीहरू गर्म छैन, फ्लोर र पर्खालहरू एक नक्कल हुन्, चिसो र असमानतापूर्ण अवस्थाको वरिपरि ....
VZMK एक आधुनिक उद्यम हो
आधिकारिक वेबसाइटमा उत्पादन र निर्माण कम्पनीले आफ्ना ग्राहकहरूको लागि अनौठो हेरविचार, उत्पादनको आधुनिक स्तर र आवश्यकता अनुसार उत्पादनको लागि शुभकामना दिन्छ। बाँकी जानकारी अन्य कर्मचारीहरु द्वारा पहिले नै अन्य कर्मचारीहरु द्वारा साझा गरिएको छ। तिनीहरूको अनुसार, OOO VZMK मा निम्न प्रणाली अभ्यास गरिएको छ:
कम्पनी कर्मचारीहरू भर्ती गर्छन्;
कठिनाई संग पहिलो महिनामा न्यूनतम वेतन भुक्तानी गर्दछ;
त्यसपछि - "त्यहाँ कुनै पैसा छैन";
ग्याँस वेल्डर्स, क्रेन ओपरेटरहरू र अन्य कामदार व्यक्तिहरू खारेज गरिएका छन्, र VZMK अर्को ब्याच अप हुँदैछ। र त्यसमा।
पैसाको कामदारहरू नोभेम्बर 2016 पछि देखिने छैनन्। तिनीहरूमध्ये धेरैले नोवोभ्याट्सकाया अभियोजक कार्यालयमा पहिले नै अपील गरेको छ।
काम होइन तर सपना छैन
त्यहाँ केर्रो शहरमा पनि कारखानाहरू छन्, जुन विफलता नियोक्ताहरूको सूचीमा छन्। यो कोटलिनच मकोनिकल प्लांट (ओजेएससी काटलिनच मकोनिकल संयंत्र, KMZ) हो, जुन woodworking र कृषि उद्योगको लागि मशीनरी र साथसाथै त्यही नामको ट्रेड हाउस निर्माण गर्दछ।
अनफ्ल्याकिंग समीक्षाहरू Kirovo-Chepetsky रासायनिक संयुक्त (ZMU के KCKHK) को समर्पित छन्। "क्यारियर" ट्याबमा, उद्यमको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध छ, यो युवा पेशेवरहरूको संभावनाको बारे जानकारी प्रस्तुत गर्ने प्रलोभन हो, जसको कम्पनीले यसको उत्पादनमा अपेक्षा गर्दछ। उनीहरूलाई राम्रो क्यारियर विकास, स्थिर काम, साथै अनुभवी सल्लाहकारको प्रतिज्ञा गरिएको छ। वरिष्ठ विद्यार्थीहरूलाई एक रोमाञ्चक अभ्यास प्रदान गरिएको छ, coursework र डिप्लोमा प्रोजेक्टका लागि विषय चयन को लागी। अनुकूलन कार्यक्रमले युवा विशेषज्ञलाई टीममा सामेल हुन र तिनीहरूको ज्ञान र दक्षतालाई सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ।
तर पहिले कर्मचारीहरूले लेखे, "यो सबै टिभि स्क्रिनबाट सुन्दर छ"। वास्तवमा, कर्मचारीहरूले प्रणाली अनुसार व्यवहार गरे: "बाड़ अझै भरी छ"। नतिजाको रूपमा, दुवै फ्याक्टरीहरू र व्यापार हाउसमा, एक पागल कर्मचारी कारोबार र कमाईको निरन्तर गैर-भुक्तानीमा।
वित्तीय र क्रेडिट संस्थाहरू
शहरको बेपत्ता नियोक्ताहरूको सूचीमा एक उज्ज्वल स्थान बैंक अफ खालिनो, अधिक स्पष्ट, यसको केडीई मार्क्स, 63 मा थप अतिरिक्त कार्यालय र यो ठीक हो, यस कार्यालय मा कार्य को प्रबन्धक। "बैंक हलिनो" 1 990को सुरुमा स्थापना भएको थियो। सबै कामको समय धेरै स्थिर आर्थिक प्रदर्शनमा पुग्यो र अहिले उहाँका खुट्टामा दृढतापूर्वक छ। क्रेडिट संस्थाले दुवै व्यक्ति र कानुनी निकायहरूमा सेवाहरूको एक विस्तृत दायरा प्रदान गर्दछ।
तर के.एक्स मा कार्यालय मा, 63 सब केहि यति रोसी छैन। नियोक्ताहरूको कालो सूची (केरोव) को समीक्षा संग परिचित गर्न को लागी प्रदान गर्दछ (एक होइन!) बैंक को यस शाखा को कर्मचारीहरु को। उनीहरूले कसरी प्रबन्धक कसरी स्वैच्छिक ग्राहकहरूलाई आफ्नो आफ्नै अधीनस्थ (पाठ सम्झौताको लागि सुझाव दिइएको छ) को बारे मा शिकायतहरू लेख्नको बारेमा कुरा गर्छन् भनेर कुरा गर्छन्! त्यसोभए, यी "उजुरीहरू" प्रयोग गरेर प्रीमियमलाई बेवास्ता गर्दछ वा अनाज्ञाकारीको लागि सजाय गर्ने प्रयास गर्दछ। बैंक कागजातहरूसँग धोखाधडीलाई समर्थन गर्दछ, जसले स्टाफलाई पनि शुल्क दिन्छ। कर्मचारीहरू यो बोनस बचत गर्नको लागि लगभग यस स्थानमा राखिएको निश्चित छन् ...
व्यापारको उद्यममा कीरोवमा काम पनि आनन्दित छैन। सडकमा "इलेक्ट्रिक सामानहरू" को बारेमा धेरै अनियमित समीक्षाहरू। श्रम, 71. कर्मचारी कारोबार अद्भुत छ। मानिसहरू एक नौकरी पाउँछन्, तर उनीहरूले वेतन पाउँदैनन्, र यसले कति समयको काम गरिरहेको थियो फरक पार्दैन। र यदि पूर्व कर्मचारीहरूले पैसाको भुक्तानीको माग गर्न "चिसो" रूपमा सुरू गर्छन् भने निर्देशकले ब्ल्याममेललाई डराउँदैनन् र चाँडैसाथ एउटा लेख भोग्नु, अदालतलाई धम्की दिन्छन्। स्टोरमा धेरै शाखाहरू छन्। स्थिति एकै ठाउँमा छ। दस जनाभन्दा बढी व्यक्ति भन्दा पहिले नै सेवानिवृत्त भयो; सबैसँग फोटो वा भिडियोको रूपमा प्रमाण छ।
पसल "पिएटरोकका", जुन सडकमा छ। लेनिन, 194, "धेरै सम्मानित" धेरै अनियमित समीक्षाहरू। ह्यान्ड को कैशियर्स र कर्मचारियों को प्रबन्धकहरु को बारे मा शिकायत गर्दै छन्, जो आफ्नो कर्मचारियों को लागि निवारण या कम से कम साधारण सम्मान नहीं ठेगाना।
नियोक्ताहरूको कालो सूची हालको रोचक संगठन - LLC "कम्पनी HIMTORG" सँग अद्यावधिक गरिएको छ। हातमा प्रतिज्ञा वेतनबाट मात्र न्यूनतम वेतन दिनुहोस्। अनि त्यसपछि बिरामीको बिदामा, (यदि तिनीहरूले गर्नेछन्) र खारेज गर्दछ। स्मरण गर्नुभएका पूर्व कार्यकर्ता मध्ये एक जना लेख्छन् कि हेडलाई थाहा छैन कि दासत्व लामो समयदेखि समाप्त भएको छ! संगठनका कर्मचारीहरू, नौकरी कर्तव्यहरू, धुलो फर्श, सफा बर्फीला र अन्य समान कामहरू प्रदर्शन नगरेपनि।
केरोव भवन निर्माण कम्पनीहरू
यस प्रकारका कम्पनीहरूको विरोधी मूल्याङ्कनको एक नेता Energoinveststroy LLC मा स्थित छ: ul। Lomonosov, 11. मजदूरी (प्रतिज्ञा उच्च) भुक्तान गरिएको छैन। कामको लागि आवेदन गर्दा, वेटाका बैंकको वेतन कार्डहरू बाहिर निस्कन्छन्। निर्देशक, शर्मीला हुनुहुन्न र डराउनु हुँदैन, संगठनलाई उहाँका कानुनमा सूचित गर्दछ र उसले कसैलाई केहि पनि तिर्न सक्दैन। उहाँले यस उद्यममा काम गर्दा प्राप्त अनुभवको सन्तुष्ट हुन प्रदान गर्दछ। अदालत मार्फत पैसा हराउन असत्य छ। सबै धन OJSC सेरोवोओस्तोकोस्नोनेगोस्ट्रो को बैलेंस शीट्स मा हो, कर्मचारी PSP Eneostroy मा दर्ता हो। र तिनको सन्तुलन खाली छ! LLC "एरर्जिनवेस्टस्ट्रो" को माध्यम ले पारित: यस नियोक्ता को लागि धेरै रिक्त पदहरू छन्, तर त्यहाँ त्यहाँ केहि पनि छैन।
कम्पनी-ओक्टोपस LLC "ग्यारेज 43" (कीरोव) द्वारा गजल नगरपालिकाले सडकमा दर्ता गरेको। Gorky, 5. मुख्य गतिविधि निर्माण कार्य विशेष छ। क्युरो 43 ले संघीय कर सेवाको संघीय कर सेवाको बारेमा ग्यारेज 43 LLCले LLC गेराज कमेन्ट 43, LLC किरिचिन 43, क्यारेक्टर 43 र एलएलसी एमसी जीसीकेसँग "जडानहरू" छ।
र तिनीहरूले खारेज गर्न कठिनाई संग सूचित गरे - दुवै अभिभावक कम्पनी र यसको "छोरीहरू" लामो समयसम्म दिवालिया भएको छ। त्यहाँ कुनै पैसा छैन, न केवल वेतन र आवश्यक आपूर्तिको लागि, तर आपूर्तिकर्ताहरू र यहाँ सम्म कि किरायेदारों को लागि। यी कम्पनीहरूको कुनै पनि प्रतिक्रियामा नौकरी खोजकर्ताहरू, लगानीकर्ताहरू र खरिदहरू उनीहरूलाई सम्पर्क नगर्ने प्रोत्साहन गर्छन्, र "पोषण नूडल्सहरू" को सम्मानित ज्ञानबारे पनि चेतावनी दिन्छ।
धातु पनि गड हो
संगठन "विटकार्कस्ट्रोइनवेस्ट" (कीरोव, शर्सर्स स्ट्र।, 70) निर्माण र विधानसभाको कामका लागि धातु संरचनाको निर्माणमा व्यस्त छ र धातु संरचनाहरू (अरेन्स, ह्याङ्गर्स, पोर्चुगल, क्यानोपिया, हरियोहाउस, किओस्क, द्वार, ग्रिल आदि) समाप्त भएको छ। त्यसैले सामानहरू र सेवाहरू प्रदान गर्ने एक साइटमा लेख्छ। अर्को इन्टरनेट स्रोतले रिपोर्ट गर्दछ कि पछिल्लो वर्ष नोभेम्बरमा कानूनी संस्थाहरूको एकीकृत राज्य रजिष्ट्रेसनबाट एक निष्क्रिय कानुनी संस्था बहिष्कार गर्न निर्णय गरियो। एउटै ठेगानामा (शर्सर्स, 70), थुप्रै अन्य संस्थाहरू भिटकास्ट्रोनिस्टिनका गतिविधिहरूसँग नजिक छन्। उदाहरणको लागि, OOO KZMK, OOO Vyatka मिसिन निर्माण कम्पनी, LLC Megalomprom र अन्य।
पहिलेका कर्मचारीहरु बाट टिप्पणीहरू रिसले भरिएका छन्। लगभग सबैले लेख्छन् कि सबै धोखाधडीहरू बाहिर, मालिक - निर्देशक "पानीबाट निस्कन्छ"। अभिभावक संगठनका सबै "छोरीहरू" दोहोर्याएर राख्छन्। कसैले प्रतिज्ञा गरेको औसत वेतन देखिएन। परमेश्वरले कम्तीमा प्राप्त गर्न अनुदान प्रदान गर्दछ, र गणनाको बर्खास्त गर्न, तपाईं छ महिना पर्खन सक्नुहुन्न।
यी समीक्षाहरू र सम्भावित खरिदहरूमा चेतावनी दिनुहोस्। त्यहाँका समस्याहरू छन् जब राम्रो वा सेवाको लागि प्रीपेड भुक्तानी "त्यहाँ छैन" थियो, यति धेरै कि कुनै पनि अन्त्य पाउन असम्भव छ।
नौसिखिया र काममा यसको परिचय को उन्मूलन
तपाईं एक काम प्राप्त अघि के खातामा लिन
काम "स्टिकर बोर्ड": सजिलो पोस्ट को पासो
Milling - यो हुनुहुन्छ? शिक्षा काम संरक्षित
किन राहदानीको सपना? किन आफ्नो पासपोर्ट मा एक टिकट को सपना?
Maykl डेल: जीवनी, उद्धरण। सफलताको कथा
HAL.dll हराएको वा भ्रष्ट (Windows XP)। Windows XP सुरुवातमा मा त्रुटि
Unturned: बित्दै जाँदा र सुझावहरू
कारहरुको लागि Korotkohodnaya घुमाव VAZ Priora
कुराकानी बिगार्न सक्छ कि4बानी